Nhau - Wakatora chikamu muCMEF 2020?
Iyo 19/10/2020 yaive kuvhura kukuru kwe83rd China International Medical Equipment Fair (CMEF) uye iyo 30th International Chikamu Chekugadzira & Dhizaini Ratidza (ICMD) muShanghai National Exhibition Center.
Huwandu hukuru hwemabhizimusi epamba akanaka kwazvo vakapinda muzviitiko zviviri izvi zvisati zvamboitika.
Mushure memakumi emakore ekuunganidzwa uye kunaya kwemvura, CMEF & ICMD yakagadziriswa kuita yepasi rose inotungamira yakazara sevhisi chikuva ichivhara cheni yese yeindasitiri yezvigadzirwa zvekurapa, kusanganisa tekinoroji yechigadzirwa, kuvhurwa kwechigadzirwa chitsva, kutengeserana kwekutenga, kushandira pamwe kwesainzi, nezvimwe. kuratidza tekinoroji yazvino mumunda wekugadzira zvigadzirwa, uye kusimudzira kudyidzana kweiyo yakazara maindasitiri cheni yezvigadzirwa zvekurapa.
Zvinonzi chiratidziro chemazuva mana chaive nedzimba sere, chakafukidza nzvimbo inosvika zviuru mazana maviri nemazana mazana maviri emamirimita. Iwo makumi matanhatu emisangano yemisangano uye maforamu, vanopfuura mazana matatu vatungamiriri vemaindasitiri uye anopfuura anopfuura 1500 zvigadzirwa zvitsva zvinotisvitsa kuti tione matekinoroji ekucheka-cheka.
Semutungamiri mune yezvokurapa indasitiri, yedu kambani Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd.
Yakaratidza dumba rayo x38 muImba 1.1 iyo yainyanya kuratidza mhando dzakasiyana dzekukodhisa catheter, laryngeal mask airway, endotracheal chubhu, gastric chubhu, denda rekudzivirira zvinhu uye zvimwe zvigadzirwa.
Ivo vese vakagadzirwa uye kugadzirwa nekambani yedu.
Iko kuenderera kuenderera kwevatengi / vashanyi vakaratidza kufarira kukuru muzvigadzirwa zvedu uye vanotarisira kubatana.
Muna 2020 chirwere cheCorvid-19 chakaunzira nyika dambudziko repasirese, panguva iyi zvakatiunzira matambudziko nemikana. Semunhu wechikwata chehondo yekurwisa denda iri, Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co, Ltd. inofanirwa kuve yekutanga kutakura denda iri, kupa rutsigiro rwakakwana rwezvinhu, kutarisisa kuvandudza nekufambira mberi, uye shingairira kupa zvakawanda kuhondo yekurwisana nedenda iri.
Mune ramangwana, Kangyuan haazokanganwe chinangwa chayo chepakutanga, kufambira mberi, kuongorora nzira nyowani yekuvandudza muChina yezvigadzirwa zvekurapa indasitiri, uye kuunza shanduko dzakadzama kune yekurapa uye yehutano indasitiri.
Chiyeuchidzo chinodziya: zvinoenderana nedenda rekudzivirira basa rekuita, vasati vapinda muhoro yekuratidzira, vese vashanyi vanofanirwa kupfeka masiki, varatidze makadhi avo eID, uye yavo Shanghai Health Code yakashandiswa muAlipay kana WeChat.